स्वास्थ्य र जीवन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छ । सामान्य त खानाबिना जीवन, त्यो पनि स्वस्थ जीवन सम्भव हुँदैन । त्यसो भए कसरी खाने पर्ला ? खाने तरिका र स्वस्थ जीवनको कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? यहाँ कसरी खाने भन्ने सम्बन्धमा केही बुँदाहरुमा उल्लेख गरिएका छन् ।
भोक लाग्नुभन्दा पहिल्यै खानुहोस्
हामी प्रायः भोक लागेपछि खान्छौं । जब भोकले च्याप्छ अनि खानाको हतारो हुन्छ । तर भोक लागेपछि खानुभन्दा भोक लाग्नुभन्दा अगाडि नै खानुको बहुआयामिक फाइदा हुन्छ । भोक लागेपछि खाँदा धेरै खाइन्छ । धेरै खाँदा पचाउन पनि गाह्रो हुन्छ भने शरीरको तौल पनि बढ्न सक्छ । यसले डाइटिङमा समस्या निम्त्याउँछ । खाना जस्तै पानी पनि बेलाबेलामा पिउनु स्वास्थका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तिर्खा लागेपछि एकैचोटि धेरै पिउने भन्दा बेलाबेलामा थोरै थोरै पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
कम खानुहोस्, छिटो खानुहोस्
एकपटक खाएपछि अर्को पटक खाने बेलासम्मको ग्याप घटाउनु धेरै उत्तम हुन्छ । खाँदा सानो सानो गाँस हालेर खानुपर्दछ र त्यसलाई राम्रोसँग चपाउनुपर्दछ । यसले पाचन क्रियालाई सजिलो बनाउँछ । हतारमा काम गर्नु अन्य क्षेत्रमा जस्तै खाने काममा पनि हानिकारक नै हुन्छ ।
मिठो होइन स्वस्थ खानुहोस्
हामी पेटका लागि खान्छौं कि आँखाका लागि ? पक्कै पनि पेटका लागि । अनि जिब्रोको निर्देशनमा चल्नु पनि राम्रो होइन । मिठो भेटेपछि जति पनि खानु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । चिल्लो पिरो स्वादिलो मात्र जिब्रो र आँखाका लागि हुन् । जीवनका लागि स्वास्थ्यवर्द्धक खाना खानुहोस् ।
क्यालोरीयुक्त पेय पदार्थ त्याग्नुहोस्
तत्काल शक्तिको लागि भनेर हामीले विभिन्न प्रकार पेय पदार्थ पिउने गर्दछौं । यहाँ पेय पदार्थको बारेमा व्यापक भ्रम रहने गरेका छन् । स्पोर्टस् ड्रिंक र कोल्ड ड्रिंकमा क्यालोरीको मात्रा बढी हुने भएकाले पिउने बानी स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन । सोडा र प्याकेटिङ जुस स्वास्थ्यका लागि ठीक हुँदैन । बरु, भरपूर पानी पिउनुहोस् ।
खाजाबाट सुरु गर्नुहोस् बिहानी
हामीले बिहानी कसरी सुरु गर्छौं ? एकैचोटि खाना खाएर ? चिया पिएर वा खाजा खाएर ? बिहान खाजा खाने बानी राम्रो हो । यसर्थ हामीले बिहान खाजाबाट सुरु गर्नुपर्दछ । बिहानी खाजाले शरीरमा तागत प्राप्त हुन्छ । दिनभरि इनर्जी दिन्छ ।
फलफूल र सागसब्जीमा जोड दिनुहोस‍्
आजकल व्यस्त जीवनको भागदौडमा खानामा ध्यान दिने फुर्सदै हुँदैन । धेरै तयारी खानेकुराबाट हामीले काम चलाइरहेका हुन्छौं । तर स्वास्थ्य नै रहेन भने जीवनको के काम ? यसर्थ, हरियो सागसब्जीमा क्याल्सियम, म्याग्निसियम, आइरन, पोटासियम र भिटामि ए, सी, ईको मात्रा पाइन्छ भने शरीरमा रक्तसञ्चारलाई सहज बनाउँछ । पालक, ब्रोकाउली, च्याउ, चाइनिज बन्दागोभी खानु बढी लाभदायी हुन्छ ।
मासु घटाऔं, माछा बढाऔं
एक हप्तामा दुई छाक माछा खानाले शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । कुखुराको मासु सकेसम्म नखाँदा नै राम्रो । हामी सोच्छौँ कि कुखुराको मासु खाँदा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । तर यो गलत हो । कुखुराको मासुको पाचन सजिलै हुँदैन । चिकेनको सौखिन नै हो भने सेकुवाको रूपमा खाँदा केही राम्रो हुन्छ ।
खानामा बोसो घटाऔं
अलिकति मोटाइयो भनेर बोसो घटाउन हामी घन्टौं दौडन्छौं तर खानामा अलिकति मात्रै ध्यान दिए बोसो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बोसोको मात्रा बढ्नु शरीरका लागि निकै हानिकारक हुन्छ । माछाको तेल, वनस्पति तेल, सूर्यमुखी तेल र जैतुनको तेलमा बोसोको मात्रा कम हुने भएकाले सीमित मात्रामा सेवन गर्नु उचित हुन्छ । यसबाट हाम्रो शरीरको स्वास्थ्य ठिक राख्न मद्दत पुग्दछ ।
आइतबार थपिए १३० जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १८६१३
मोटा मानिसहरुलाई कोरोना भाइरसको जोखिम ज्यादा
शनिबार थपिए १०९ जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १८४८३
शुक्रबार थपिए १३३ जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १८३७४
बिहीबार थपिए १४७ जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १८२४१
अब केवल ४ जिल्लामा मात्र २०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमित, हेर्नुहोस् ७७ जिल्लाको अवस्था
बुधबार काठमाडाैमा थप ३ जनामा संक्रमण पुष्टि
बुधबार थपिए १०० जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १८ हजार नाघ्यो
मङ्गलबार थपिए १५० जना कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितको संख्या १७९९४
कोरोनाविरुद्ध खोपः अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीलाई अहिलेसम्म कै ठूलो सफलता